Cable izihlanganisi ke Lugs Manufacturers kunye Suppliers | China Cable izihlanganisi And Lugs Factory
Le izihlanganisi ombane Intambo ephantsi (nolunye ekuthiwa cable sleeve) zaye zaphuhliswa ukuze wokuhambisa umbane kwimigca amandla ka-1 kV. Jera umgca uye wafunda iintlobo enkulu izihlanganisi ombane aphantsi, kunye iindibano ezahlukeneyo kunye nendlela lomsebenzi. Siphumeze ezimotweni cable jointing ifanelekileyo ngenjongo nokupheliswa kunye uqhagamshelwano zokuhambisa
Thina uluhlu ilandelayo izihlanganisi cable izincedisi:
* Izihlanganisi intloko noMasalela evulwa
Le lugs cable ombane aphantsi zisetyenziselwa ababhexeshi intambo kwimigca lombane 1 kV. Jera wenza uphando uluhlu olubanzi lugs USB, zonke izakhiwo ezininzi kunye neenqununu zomsebenzi kwaye aqulunqa ifanelekileyo ngenjongo nokupheliswa kunye uqhagamshelwano komgca transmission.
Thina ntlobo zilandelayo cable ndiwele:
* Lugs noMasalela intloko evulwa cable
Ubukhulu oluqhelekilyo lugs intambo intloko evulwa shear 10 ukuya 240 mm2, ngokuba lugs intambo pre-zigqunyiwe 10 ukuya 95 mm2. Ezi mpawu ukuvumela ukuba banikele kuwe uluhlu mveliso kakhulu ukulungiselela ngokubanzi okanye iintambo.
Yokuvelisa uchebe lugs intloko intambo amandla aphezulu, umhlwa enganyangekiyo izinto aluminium.
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLBV 25-50
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 10-25
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLBV 120-300
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 25-50
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 35-150